केपी ओली अढाइ वर्षमात्रै प्रधानमन्त्री ! – तहल्काखबर
केपी ओली अढाइ वर्षमात्रै प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं / निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै पूर्व अनुबन्धनका कारण अढाइ वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छाडिदिनुपर्ने भएको छ ।
तर, पार्टी अध्यक्ष नि ? यसबारेमा वाम गठबन्धनको सम्झौतामा केही लेखिएको छैन, सामुहिक नेतृत्व हुनुपर्ने माओवादी नेताहरुको शर्त छ । र, यसमा एमालेभित्रको माधव नेपाल र वामदेव गौतम समूहले पनि एकै व्यक्तिमा नेतृत्व केन्द्रीकरण गरिन नहुने मत राख्दै आएको छ । अनलाइन खबर
← काग सम्बन्धि रोचक तथ्यः यसरी दिन्छ कागले १० शुभ र अशुभ सुचना
कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्छः सिचाइँमन्त्री गौतम →